Posted by khine wai zan In:
ထုံးစံ အတိုင်း လူစုပြီးကေ ထမင်းချက်စားဖို.အစီအစဉ်ကို စနီနိခါ လုပ်ဖြစ်တေ။ မြတ်ရှင်က မိုးလင်းကပင်ရောက်လာပြီကေ ဈီးလားခီကတ်တေ ၂ ယောက်။ ဘရေးဂါး ဟင်းရည်သောက် ချက်ချင်စော် ဘရေးဂါးရှာလို.မရခ လကျောက်သားရပါလတ်တေ။ ရကြက်ကလေ့ လလတ်ဆဆတ်မရှိခါ နောက်တစ်နီရာကနီ ဝယ်ဖို.ဗျယ်ဆိုပြီးကေ ပါလတ်ကတ်တေဗျယ်။ အပြန်လမ်းမှာ မုန်.ဟင်းခါး ဝင်လို.စားခသိရေ။း) အိမ်အောက်မှာ ဗမာဆိုင်ရှိရေ အတွက်နဲ. မုန်.ဟင်းခါး၊ ရခိုင်မုန်.တီ ( တခုလေ့သင့်မကောင်း ) အုန်းနို.ခေါက်ဆွဲနန်. ကြာဇံချက် ကြိုက်တေ အချိန်စားလို.ရရေ။
ယဂေ အချက်ကောင်းနှစ်ယောက် အိမ်ပြန်လာခါ ၁၀နာရီ ထိုးဗျယ်။ ၁၂ နာရီခါ လူတိ အားလုံးကိုဖိတ်ထားစော်။ ဟင်းက ၅ မျိုးလောက်ချက်ဖို.စော်မှာ။ ခေါင်းတိတောင် ကြီးလာပိုင်တွိရေ။ ထမင်းတစ်အိုးအယင်တည်ပြီးကေ ရကြက်ဝယ်ဖို. ဗြီးလို.ထွက်ရရေ။ မြတ်ရှင်နဲ. နှစ်ယောက် ဝတုတ်ဖျင်၊ ကင်းစွန်းရွက်ချိုး၊ ရီကြက်ပြုတ်။ ရည်းစားဖုန်းကလေ့ တစ်ဖက်ပြောရသိရေ။ အလုပ်များချက်။ ယင်းမှာတစ်ယောက်ရှိကေ ဘလောက်ပျော်မေမသိ အေပိုင်လုပ်စားရကေ။ အိမ်း ရွီးယင်းနဲ. လမ်းချော်လားယာ။း)
တနားနီကေ ဇံဇံရောက်လာရေ။ မြတ်ရှင်က လကျောက်သားဟင်းရည်အိုးကို ဆရာကြီးလုပ်လို. ယင်ရေ။ မသေချာခါ အမင်သည်ကို ဖုန်းဆက်ပြီးကေ မီးမြင်ယင့်။ ပြီးလို.မြည်းကြည့်လိုက်ခါ လလီးပပိုက် ကောင့်ယင့်ထော။ အားလုံးသူက အချက်ကျွမ်းရေလူတိ မဟုတ်။ လုပ်ချင်စော် လုပ် ပျင်ချင်စော်ပျင် လုပ်ကေလေ့ ဖြစ်လားဝါဒေ။ ဝတုတ်တစ်အိုးလေ့ ချက်လို.ပြီးရေ။ ကင်းဇွန်းတအိုးကျော်ရေ ဇံဇံမှာ။ ယဂေ ၁၂ နာရီထိုးယာ။ ဧည့်သည် နောက်ထပ်သုံးယောက် မပေါ်လာသိမ့်။ ရခိုင်သားနာရီ နဲ.လာဖို.ရှိဖို.လို.တော့ တွက်ပနာ ငရုတ်သီးကြိတ်ကတ်တေ။ ဇံဇံ က ထမင်းတိ ခူးနီဗျယ်။ ဝမ်းဆာ မခံနိုင်ဗျယ် ဆိုဝါ။
အားလုံးလေ့ ပြီးဗျယ်။ ၁၂ နာရီခွဲလောက်ရာ ခင်ဥမ္မာထွန်းရောက်လာရေ။ စားပလိုက်ကတ်ဖို.ဗျယ်ဆိုပြီးကေ ဆွဲကတ်ပျယ်မနားယေ။ ကျော်ဖြိုးဝေ က အရက်နာကျလို. အခုမှ နိုးသိဆိုဝါ။ လာဖို. နောက်ကျဖို.လတ်။ ဖြစ်ရဖို.။ အေးမြတ်မွန်လေ့ လာဖို.နောက်ကျဖို.လတ်။ လာခါမှလာ တပျင်းအုပ်ကတ်စော်ဗျယ်။ ရကြက်သုပ်တောင်မှ ယလောက်မစွန်။ ဝတုတ်တစ်အိုး တဝက်လျော့လားရေ။ ငရုတ်ကြိတ်ကလေ့ စွန်ရေ။ သံပရာသီး တိ ပြိုပါရေ အချဉ်လိုရေ အချဉ်လိုရေ နန်.ပင်ထည့်ကတ်စော်။ ကျော်ဖြိုးဝေရောက်လာရေ စားရေ တလောင်ဗွန်းတည်း။ ဇံဇံက ဘာဘီကျူးလုပ်ဖို.လားဗျယ်။ အေးမြတ်မွန်နဲ. သူငယ်ချင်း ရခိုင်သမချေတယောက်ရောက်လာရေ။ သူရို.ကမှ အားရပါးရ စားစော်။ ကိုယ်၇ို.နဲ. ဂိုဏ်းတူတိ။
ဖိတ်ထားစော် လူတိလေ့ အားလုံးရောက်ရေ။ ချက်ဖို. စီစဉ်ထားစော်တိလေ့ အားလုံးချက်ဖြစ်တေ။ ထမင်းလေ့ မပို ဟင်းလေ့ အားလုံးနီးပါးကုန်ရေ။ ယပြီးခါမှ စိတ်ချမ်းသာလခရေ။ အစောကြီးလာကူပီးရေ မြတ်ရှင်နဲ. ဇံဇံကို ကျေးဇူးတင်ရေ။ မြတ်ရှင်ကတော့ အရာတစ်ပတ်ခါ ကြာဆံသုပ်စားကတ်မေဟေး လို.ခေါ်တောင်းလို. လားခရေ။း) တွိကတ်မေ နင်းရာဟေး နောက်အပတ်ခါ။း)
ကျော်ဖြိုးဝေနဲ. အေးမြတ်မွန်လာခါ အလောသုံးဆယ်နဲ.ဆိုခါ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ဖို. ယက်ဖို. မိလားရေ။း) နောက်တစ်ခါပေါ့။
This entry was posted on 10:31 PM You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
:P hehe... ခေါ်ရာခေါ်ပါ နောက်ထခါ..း) အများကြီးချန်ထားပါနန်း
စိတ်ချ၊ နောက်တစ်ခါ ဆိုကေ အယင်ပါလတ်။ တစ်ဝ စားရအောင်။း)
အော် မဇံ တယောက်လေး ကန်ဇွန်းရွက် ကောင်းကောင်းကြော်တက်လားဗျယ်မနားယေ။
ထီပေါက်နိုင်ရေ အခွင့်အလမ်း (ရခိုင်သမများ အတွက်သာ)
khine wai zan
When I try to be honest, they call me silly..When I try to mind my own business, they call me selfish.. When I say no, they call me cruel.. When I say yes, they call me dumb. When I try to go my own way, they call mealost soul..When I just dont want to easily give up, they call me stubborn..When I try to put onabit of make up, they call me poser.. When I don’t put on make up, they call me ugly..When I try to tellawhite lie, they call me lier..When I lie, they call meabitch..When I said I needapair of shoes, they called me self conscious.. When I try to go by the rules, they call me stupid..When I live like every body does, they call measlacker..When I keep quiet in argument, they call me naive and foolish .. When I talk back, they call me rude.. When I takearest, they call me lazy.. When I m busy, they call meabootlicker.. When I wear tank top and tight jean, they call me showing off.. When I wear T shirt and pants, they calle me fat ass.. If you think I care about your one-sided opinion, U'd be wrong. You don’t know me. Don’t judge me without knowing me.